Blog | Fursad
Howsha shaqo-siinta gabdhaha waa in laga wada qeybqaataa. Shirkad, hay’ad ama qof kasta rag iyo dumar wuxuu kaalin ka qaadan karaa howshan. Haweenka qalin jebiyey: Waa in ay la yimadaan howl-karnimo, korna u qaadaan awoodooda xirfadeed, isla markaana aysan ku niyadjebin caqabadaha jira. Haweenka haya xilalka sare: Waa inay mudnaata koowaad siiyaan haweenka marka ay
Mashruucan wuxuu leeyahay ujeeddooyin loogu talogalay inuu gaaro. Waxaa la dajiyay qorshayaal lagu xaqiijinayo in la gaaro ujeeddooyinka. Qodobada soo socda ayaa ugu waaweyn ujeeddooyinka mashruuca: In dareenka shacabka lagu soo duwo caqabaddaha ay gabdhaha jaamacaddaha ka qallin jabiyey kala kulmaan inay shaqo helaan In lagu dhiirro-galiyo dhinacyada wax shaqaaleysiiya sida shirkadaha, dowladda, NGO-yada, bahda waxbarshada
Waxaa laga yaabaa inaan dhayalsano faa’iidada ay leedahay in gabdho shaqo laga siiyo shirkadaheena. Sababaha soo socda waxay muujinayaan muhiimadda ay leedahay inay shaqaaleysiiyo gabdho. Haweenku waxay 50% ka yihiin shacabka Soomaaliyeed. Haddii gabdhaha waxbartay aysan ka qeybgalin dhaqaalaha dalka, waxay taasi la mid tahay inaan 50% xoogga Soomaaliyeed ee shaqeyn lahaa aynan ka faa’iideysan.